Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iCloud in Android
iCloud syncs sawiro aad iPhone oo isticmaaleya ay "Photo Stream" feature, laakiin sidii wax kasta oo kale, waxaa kale oo uu leeyahay qaar ka mid ah la dhaafi karin. Mid ka mid ah tusaale ahaan, in aad laga yaabaa inaanu ogeyn oo ku saabsan waa in uu leeyahay suuqa kala xaddidan lagu kaydiyo ee 1000 sawiro oo kaliya sida ugu danbeeyay ee 1000 sawirrada synced ka iPhone in aad lacagta iCloud eegin xaqiiqada ah waxaa laga yaabaa in aad leedahay in ka badan 1000 sawirada u baahan in la xoojiyaa (qiyaasi tirka qaar ka mid ah, fekerayo in ay waajib ku helay xoojiyaa;! oh naxdinta badan). Khasaaro kale waa in ay bixisaa dadka isticmaala 5 kaliya GBS ee lagu kaydiyo oo bilaash ah kaas oo ka daadi kartaa si deg deg ah halkii. Sidaas, mid laga yaabaa in ay beddelaan dhufto iyo tijaabiso aalad Android kaas oo xogta oo dhan waxay u yeelan doonaan in ay la yimiday oo loo dhigay qalab cusub Android.
Waxaad mar walba si aad Android wareejin kartaa sawiro iCloud la isticmaalayo habka weli dheer caadi ah oo ka mid ah degsado aad sawiro iCloud in aad iPhone, dayanayaan taasi oo ka cable USB ah, kuwaas oo sawiro ka iPhone in aad PC, xira qalab Android hadafkaagu yahay in aad PC via cable USB ah ka dibna haddana mar kale kaga dayanayaan sawiradan ka PC in qalab Android aad. Sida haddii waxan oo dhan in deeruhu iyo koobiyeynta uusan ku filnayn, kuwaasoo ah idinka ee u baahan kartaa inaad kala soo baxdo laba software si loogu badalo noocyada xogta iyo wixii aan. No, waxa aan halkan ku soo afjaraan, waxaa aad u badan oo halis ku lug maadaama ay dhibaato ma u baahan tahay dadaal kasta oo ku soo hanaanka waxan oo dhan ay. Hadda, Anigu garan maayo waxaad ku saabsan laakiinse kaas hubaal waa qof jecel fudayd ah ma xataa sida codka oo dhan shaqo adag.
Ka hor inta aadan la tashan google search si aad u ogaato macluumaadka wareejinta software ugu fiican iCloud, aynu waxaad badbaadin halganka oo ku bari kara mid. Wondershare MobileTrans waa qalab aad u faa'iido kuu ogolaanaya inaad si ay u gudbiyaan sawirro aad ka iCloud in qalab Android adigoo si fudud u riixaya badhanka ah . Waxaa lagala soo bixi karaa in aad laptop / computer oo waa la jaan qaada labada Windows iyo OS Mac. Waxa keliya ma aha kuu ogolaanaysaa inaad dhan sawiro aad ka xisaabtaada iCloud heli laakiin sidoo kale aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan dhammaan xiriirada, music, abuse wac, xiriirada, fariimaha iyo videos sidoo kale!
Kaliya gooyay in tartanka oo bilaabin isticmaalka gabal cajiib ah taas oo ah software. Tani fudud hanuuniyo aad qaadato iyada oo tallaabooyin taxane ah si loo baro in aad sawiro ka iCloud wareejiyo Android:
1. Download Wondershare MobileTrans ka eeg xiriirka hoose la siiyey. Gashato on your computer / laptop, waxay u ordaan oo login in aad xisaabta iCloud isticmaalaya Log ee qaybta shaashadda guriga ee MobileTrans ah.
2. koronto in qalab Android aad via cable USB aad laptop / computer ah. Dooro gurmad iCloud ee doorasho. Pop up menu A muuqan doonaa bar hawl muujinaya horumarka download ah; sugto download si ay u buuxiyaan.
3. Marka files gurmad dhammeeyaan duuban, ka menu ku tilmaamay "Dooro Content soo celinta", calaamadee checkbox in u dhiganta "Sawirro" oo ku dhacay "Start Copy". Photos in aad kaliya xoojiyaa ka iCloud si toos ah guuriyeen doonaan in qalab android aad.
Ka dib markii ay soo socda, kuwaas oo saddex tallaabo oo sahlan oo aad hadda ku yeelan karaan dhammaan sawiro aad qalabka Android adiga oo aan wax yeellayn mahayaan. Sidoo kale, inta kale xaqiijiyay in badan ka sahlan tan ma heli; fekero, oo dhan aad uga samayn jiray fur in qalabka iyo guji ah badhamada yar! Sidaas darted, haddii aad tahay qof u hureen, argagax ama si cad caajis, MobileTrans waa ikhtiyaar kaamil ah oo aad u.
Waxa ay noqon doontaa xusay halkan ku kacaya in MobileTrans ma ahan oo keliya kuu ogolaanaysaa inaad aad u sawirada aad ka iCloud wareejiyo qalabka Android laakiin waxa ay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda xisbiga saddexaad (oo ay la socdaan farabadan oo wax kale!) ka iPhone in telefoonka aad Android si fudud by doorto sida "Apps" calaamadeeyay ka "Dooro Content soo celinta" menu. Sidoo kale yaabaa in aad dareentay in MobileTrans ubadan shaqo aad u baahan in aad kaliya guji badhanka ama laba taas oo kaliya qadarka dadaal ugu naga mid ah doonayaan inay haatan ku riday maalmood ah!
1. Ka dhig gurmad aad music iCloud iyo in la hubiyo ma aha in aad u tirtirto. Waxaa dhici karta in si degdeg ah haddii wax qaldamaan.
2. Marna ha isku hallayn software ah in aad soo bixi website ka xisbiga saddexaad sida waxa uu dhaawici karaa qalab aad.
3. Hubi in aad si fiican u akhriyaan una fahmaan dhammaan tallaabooyinka ka hor inta sii dheeraad ah si looga fogaado dhaawac qalab aad ama is geliyey wax dhibaato aan loo baahneyn.
> Resource > iCloud > Sida loo sawiro ka iCloud wareejiyo Android